Euractiv, Financial Times, Politico Europe ayaa WAX DHEER ah ugu sheegin Waraaq Furan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Euractiv, Financial Times, Politico Europe ayaa WAX DHEER ah ugu sheegin Waraaq Furan
Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Jabhada Malta • News • Dadka • Waajib ah • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Professor Geoffrey Lipman, madaxweynaha Jaaliyadda Socdaalka Cimilada Caalamiga ah (ICTP) iyo Juergen Steinmetz, oo ah guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa u sacab tumay 16 urur oo reer Yurub ah oo diidanaa inay ka qayb qaataan ka -qaybgalka munaasabadaha Yurub ee ay soo abaabuleen daabacaadaha si furan u taageera shidaalka fossil.
16 ururrada bulshada rayidka ah ee hormuudka ah ayaa sheegay in aysan mar dambe aqbali doonin casuumaad si ay uga hadlaan munaasabadaha warbaahinta ee ku saabsan siyaasadda Midowga Yurub oo ay maalgeliyaan shirkadaha shidaalka fossil.
Waxay ku dhawaaqeen warqad furan oo ay u direen tifaftireyaasha saddexda urur ee wararka Yurub, Euractiv, Financial Times iyo Politico Europe.
Warqadda ayaa ku qornayd: Sir / Madam, Annagoo ah dadka u ololeeya Yurub ee wax -ka -qabashada cimilada iyo caddaaladda cimilada, waxaan kuu soo qoraynaa inaan ku ogeysiino inaanan mar dambe aqbali doonin marti -qaadyada si aan uga hadalno munaasabadaha uu abaabulay ururkaaga warbaahinta ee ku saabsan siyaasadda Midowga Yurub oo leh kafaala -qaadka fossil shirkadaha shidaalka.
Warshadaha shidaalka fosil -ka, sida warshadaha tubaakada ka hor, sawirku waa wax walba. In loo arko lammaane sharci ah oo qayb ka ah xalka dhibaatada cimilada waa furaha. Iyagoo kafaala qaadaya dhacdooyin heer sare ah oo ay abaabulaan warbaahinta sida kuwaaga, warshadaha shidaalka fosilku waxay iibsanayaan barxad si ay u helaan kalsooni iyo saamayn aan loo baahnayn.
Xilliga ay war -baahinta ku faafto warbaahinta bulshada, iyo marka xayeysiiska iyo nuxurka tifaftirka ay sii kordhayaan khiyaanada si loo kala sooco, waxaan si adag u aamminsanahay in warbaahinta xorta ah ay leedahay door muhiim ah si ay u ilaaliso dimuqraadiyadda iyo hadalka xorta ah.
Si kastaba ha ahaatee, baadi -goobka ujeedo -lahaansho looma adeego iyada oo loo oggolaado in warshadaha shidaalka fosilku ay kafaala qaadaan aaladaha warbaahinta. Doorka sii socda ee danaha dhuxusha, saliidda iyo gaaska ee dardargelinta xiisadda cimilada iyo wiiqidda ficilka cimiladu ma aha arrin ra'yi, oo u oggolaanshaha warshadaha in ay sii waddo qaabaynta wada -hadalku waxay kaliya u adeegi kartaa dib -u -dhigidda tallaabooyinka deg -degga ah ee loo baahan yahay in lagu xaddido kulaylka caalamiga ah dabeecadda iyo bulshada oo is -hortaagi karta.
Erayada malaayiin carruur ah oo iskuul-cimilada wax u dhimaya: gurigayagii waa gubtay.
Warshadaha shidaalka fossil -ka ayaa gacanta ku haysta qasacad batrool. Marka shirkadaha shidaalka fossil ay ka faa'iidaystaan ​​kalsoonida aaladaha warbaahintaada oo qayb ka ah istaraatiijiyad lagu dejinayo shuruudaha doodda dadweynaha iyo in la isu geeyo meel u dhow go'aan-qaatayaasha, waxaad ka caawineysaa inay shidaalka ku shubaan dabka.
Waxaan kuugu mahadnaqaynaa inaad daabacdo warqaddan si akhristayaashaada iyo ka -qaybgalayaasha dhacdooyinka loogu wargeliyo sababta ururradeennu uga maqan yihiin dhacdooyin kasta oo aad abaabuli karto iyagoo taageero ka helaya warshadaha shidaalka fosil. Waxaanan kugu boorinaynaa inaad sii dheeraato wax ka qabashada dhibaatada dhagaraysan ee saamaynta shidaalka fosil -ka, adiga oo aan mar dambe qaban -qaabin wax munaasabad ah oo ay kafaala -qaadayaan shirkadaha shidaalka.
Siyaasadda Xorta ah ee Lafo
Xiriirka Ururada Bulshada ee Yurub
Waxqabadka Cuntada iyo Biyaha Yurub
Saaxiibada Dunida Yurub
Markhaati Caalami ah
Dabeecadaha Caalamiga ah
Gaadiidka & Deegaanka
Xafiiska Siyaasadda Yurub ee WWF